PRINCE2 Foundation Fampiofanana momba ny fampianarana sy mari-pankasitrahana
PRINCE2® (Tetik'asa IN Controlled Environments), dia fomba fitiliana manerantany ampiasain'ny tetikasa izay mamakivaky anao amin'ny alàlan'ny fanatsarana ny tetikasa mahomby. PRINCE2® dia fomba goavana ary mikendry ny karazana tetikasa rehetra.PRINCE2® dia rafitra de facto novolavolaina ary nampiasaina betsaka avy amin'ny governemanta britanika ary dia ankatoavina sy ampiasaina any amin'ny sehatra tsy miankina, na any UK na iraisam-pirenena. Izany dia maneho ny fomba amam-panao sy ny fananana tsara indrindra amin'ny fitantanana ny tetikasa.
Fantaro ny votoatiny, ny foto-kevitra sy ny tanjon'ny METY PRINCE2
Mahatakatra sy mampihatra ireo printsy, fitsipika ary lohahevitry ny PRINCE2
Fantaro ny lanjany sy ny foto-kevitr'ireo fomba fiasa mifantoka amin'ny fitantanana ny tetikasa
Ampiasao ny tetikasa Manager amin'ny fahalalana mba hampihatra PRINCE2 amin'ny tetikasa
Ny fikambanana na ny olona tsirairay dia mahita ny filàna fanaraha-maso mahomby amin'ny fitantanana tetikasa. Ny mpitantana ny tetikasa, ny mpanolo-tsaina ary ny tolotra fanampiana dia mila fahatakarana tanteraka momba ny lafiny rehetra amin'ny fiainana andrana eo amin'ny tetikasa miaraka amin'ireo tahiry fitantanana manan-danja izay tokony hamboarina mandritra ny dingana tsirairay.
Fepetra momba ny fianarana Duration: 6 Days
2 Organisation Project
Asa sy andraikitra
Ny birao amin'ny tetikasa
Fanohanana ny tetikasa
Zava-dehibe sy manan-danja
Components & karazana plan
Ny dingana amin'ny fandrindrana
Fanomezandàlana momba ny asa
Fametrahana tetikasa & fandeferana
Andraikitra sy manasongadina ny tatitra
Manaraka toe-javatra miavaka
Olana amin'ny tetikasa
Tatitra momba ny tetikasa
Karazana fandraharahana ara-barotra sy tetikasa
Famakafakana sy fitantanana ny risika
Ny log de risque
Manome toky ny kalitao
Fanaraha-maso ny kalitao sy ny famerenana tsara
Hanova dingana ny fanaraha-maso
Fepetra momba ny fahefana
Famakafakana ny fiantraikan'ny fitantanana Configuration
Manomboka sy manomboka tetikasa iray
Mitantana tetikasa iray
Mitantana dingana iray
Mitantana ny entana vokatra
Famaranana tetikasa iray
Fanontaniana 75 isaky ny taratasy
Fanontaniana 5 ho an'ny fitsarana ary tsy voaisa amin'ny isa
Ny marika 35 dia mila mandalo (amin'ny 70 misy) - 50%
60 minitra faharetana